Frp oo Trump u sharaxay bilada Nabadda aduunka (Nobel Peace Prize) - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Frp oo Trump u sharaxay bilada Nabadda aduunka (Nobel Peace Prize)
Frp oo Trump u sharaxay bilada Nabadda aduunka (Nobel Peace Prize)
Christian Tybring-Gjedde oo ah ku xigeenka gudiga difaaca iyo arrimaha ee golaha baarlamaanka Norway, ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump lagu daray liiska dadka sanadkan ku guuleysan kara biladda nabadda aduunka ee Nobel Peace Prize. Wuxuuna sheegay in Trump uu biladaas ku muteysan karo doorka uu ka ciyaaray heshiiska isku soo dhaweynta carabta iyo Israel, gaar ahaan heshiiska labada dal ee Imaaraadka iyo Israel, halka ay wadamo kale oo carab ah saf ugu jiraan heshiis rasmi ah oo ay la galaan Israel.
Tybring Gjedde oo wareysi siiyay Tv-ga Fox News ayaa sheegay in heshiiskaas oo uu Trump sababteeda lahaa, uu wax weyn ka badali karo xaalada barriga dhexe, uuna abuuri karo xaalad isku dhawaansho oo saameyn toggan ku lahaan karto nabadda aduunka.
Trump ayaa ilaa xalay dhowr Twitter iska soo daba ridayay, isaga oo la ashqaraarsan bilada loo sharaxay, wuxuuna horey u sheegay inuu horey u mudnaa in biladaas isaga la siiyo.
Xigasho/kilde: Tybring-Gjedde i Fox News-intervju: – Jeg har nominert Donald Trump til Nobels fredspris.
Previous articleKommune lagu canaantay dacwo ay masaajid ka gudbiyeen.
Next articleR.W Solberg oo ka hadashay xaalada cusub ee Corona.
Lørenskog: Hooyo labo(2) wiil oo ay dhashay ceejis ku dishay oo 21 sano lagu xukumay.
Ma degantahay Stavanger iyo nawaaxigeeda, fursadan caruurtaada uga faa´iidee.
Daawo Dowlada: Dadkan ayaa karantiilka laga dhaafay, iyo sharciyada kale ee cusub
Soomaali mar kale loo doortay hogaanka Dalada Ururada islaamka Norway
Norway oo sharci siineyso turjubaanada iyo shaqaalaha u dhashay dalkan: Sababtan awgeed
Dowlada: Qofkii talaalka dhameystay, ma gali doono karantiil laga bilaabo xiligan.
Keydka NorSom Velg måned juni 2021 (23) mai 2021 (48) april 2021 (67) mars 2021 (70) februar 2021 (51) januar 2021 (55) desember 2020 (50) november 2020 (67) oktober 2020 (75) september 2020 (54) august 2020 (82) juli 2020 (54) juni 2020 (69) mai 2020 (83) april 2020 (68) mars 2020 (130) februar 2020 (69) januar 2020 (84) desember 2019 (22) november 2019 (71) oktober 2019 (54) september 2019 (50) august 2019 (96) juli 2019 (77) juni 2019 (78) mai 2019 (79) april 2019 (40) mars 2019 (64) februar 2019 (61) januar 2019 (40) desember 2018 (25) november 2018 (52) oktober 2018 (33) september 2018 (44) august 2018 (33) juli 2018 (28) juni 2018 (28) mai 2018 (39) april 2018 (41) mars 2018 (55) februar 2018 (36) januar 2018 (85) desember 2017 (83) november 2017 (105) oktober 2017 (119) september 2017 (112) august 2017 (109) juli 2017 (125) juni 2017 (115) mai 2017 (122) april 2017 (108) mars 2017 (137) februar 2017 (114) januar 2017 (106) desember 2016 (98) november 2016 (101) oktober 2016 (83) september 2016 (44) august 2016 (44) juli 2016 (28) juni 2016 (44) mai 2016 (24) april 2016 (25) mars 2016 (1)
Lørenskog: Hooyo labo(2) wiil oo ay dhashay ceejis ku dishay oo...
Norsomnews - 11. juni 2021 0
Daawo Dowlada: Dadkan ayaa karantiilka laga dhaafay, iyo sharciyada kale ee...
Norsomnews - 10. juni 2021 0